Kedu ka esi enye ụmụ na-azụ mmanụ?
Ụmụaka ụmụaka oge a, dịka iwu, n'oge anwụchị-oge oyi-oge, ma ọ bụ karịa, site na September ruo May, nye ụmụ ntakịrị nri nke vitamin D 3. Tupu mgbe ahụ, kama ịbụ "Aquadetrima" a ma ama (ọgwụ bụ ọgwụ ngwọta nke vitamin D 3 ), umuntakiri a na-enye umu ha. Na-enyocha ihe niile bara uru na ọgwụ nke ọgwụ ndị e kwuru n'elu iji gbochie rickets, m chọrọ ịkọrọ ndị na-agụ akwụkwọ nwere mmasị na ozi a.
N'ụzọ dị mwute, ọtụtụ ndị nne amaghị ọbụna na mgbochi nke rickets ọ bụghị nanị site na "Aquadetrim", kamakwa site na ngwaahịa ndị sitere na imeju nke azụ azụ - azụ azụ. Ogoro onye obula n'echeghi banyere uzo esi esi enye umu umu ohia. Ma n'oge gara aga, na oge Soviet, a na-ejikọta ụmụaka nọ na ụlọ akwụkwọ ọta akara ma nye ha nnukwu mmanụ mmanụ bara uru.
Ee, ekwenyere m, ọ dị mfe inye nwa ntakịrị nke cholecalciferol, ya mere, n'ezie, a na-akpọ ya vitamin D 3, ihe iji mee ka ọ dịkwuo njọ, na ọbụna njọ, ka ọ "wụsa" nwa ahụ na mmanụ azụ. Ya mere, m n'onwe m nyere ada D 3 mgbe ọ dị otu afọ (mgbe niile, dịka dọkịta kwuru, onye ọ bụla kwuru na mmanụ adịghị azụ) ọ bụghị oge niile na-adịghị anwụ anwụ, ma n'oge ọ bụla nke ndụ, anyị gafere n'atụghị egwu na mmanụ azụ ma mee enyi ya n'ụzọ zuru oke. Echetara m otú "nri" mbụ anyị si jupụta na uwe elu, nke obere nwa agbọghọ ahụ na-agbapụta ngwaahịa ọhụrụ, mgbe ahụ, ihe dị ka iri mere, ebe m na-asa ndị ahụ bara ọgaranya "na-esi ísì ụtọ". Ma isi ihe a abụghị nke a. Ọ dị anyị mkpa ịchọpụta ihe ndị na-egosi, contraindications na mmetụta ndị dị na ọgwụ dị mkpa ma dị mkpa maka ahụ nwatakịrị.
Ama maka iji
Nke mbụ, a na-enye vitamin D maka mgbochi na ọgwụgwọ rickets, rickets dịka ọrịa na osteoporosis. Ọ bụrụ na anyị na-atụle ihe gbasara akara mmanụ, mgbe ahụ, ha dị ọtụtụ. Azụ mmanụ na-enyere aka idozi nsogbu nke hypo-na avitaminosis A, ọrịa anya, na-eji agwọ ma gbochie rickets, ọrịa na-adịghị ala ala na ọrịa na-adịghị ala ala, mee ka ọrịa ndị na-emerụ ahụ dịkwuo mfe, yana ịgwọ ma gbochie ọtụtụ nsogbu ndị ọzọ. A na-enye ya iwu maka ndị inyom bi n'ebe ugwu dị na ime afọ n'oge ime ime na lactation.
Contraindications na mmetụta dị n'akụkụ
Ọ bụrụ na vitamin D nwere ọtụtụ ihe ngosi iji mee ihe, mgbe ahụ, ọtụtụ ihe ndị ọzọ na-ekwu, bụ nke a na-apụghị ikwu maka mmanụ azụ. N'ezie, vitamin D bụ ọgwụ ọjọọ, ọ bụghị dọkịta ọ bụla na-adụ ọdụ na-ewere ya naanị maka nzube nke igbochi. Ọbụna a kwenyere na ọ ka mma ichere maka anyanwụ karịa inye nnukwu ihe dị n'ime imeju nwa. Ngwurugwu maka iji mmanụ azu eme ihe bụ iji ọgwụ ọjọọ eme ihe, nakwa dị ka ihe nketa hemophilia.
Uru nke mmanụ azụ
Dịka anyị na-ahụ, mmanụ azụ nwere ọtụtụ uru na ọ dịghị ihe ọ bụla na-abaghị uru. Ya mere, na igbochi rickets na ụmụntakịrị, o yikarịrị ka ọ ga-enye mmasị na ngwaahịa dị - mmanụ azụ. Na ka ị ghara inwe obi abụọ banyere uru ọ na-enweghị atụ, mesie ike ya dị oke mkpa.
Dị ka a maara, mmanụ azụ nwere ezigbo omega-3 polyunsaturated acy fatatu acids maka eto eto. Ekwadoro na omega-3 na-akwalite nhazi na mmepe nke anụ ụbụrụ, nke dị oke mkpa n'oge nwata, ọ na-enye aka na-akpali akpali nke mmepụta echiche nke ụmụ ọhụrụ.
N'oge a, a na - achọpụta ụmụaka mgbe mgbe na enwere nsogbu na-adịghị mma na hyperactivity. Nri nke polyunsaturated fatty acid acga Omega-3 na-eme ka ụmụ ha na-enwekwu nchekwube, na-enwe ike ịgụ akwụkwọ, omume, na ịme ihe nke ụmụ ọhụrụ. Enweghi omega-3 na-akpata ụmụaka dị otú ahụ dịka nchekasị, ọrịa hyperactivity, impulsivity na ụra. N'ihi ya, mmanụ azụ na-arụ ọrụ dị mkpa n'ime mmepe nke ụmụaka, na-enyere aka ichebe ha pụọ ​​na nsogbu ndị dị otú ahụ dịka enweghị ncheta na nhụjuanya.
Kedu otu na usoro ọgwụgwọ iji nye ụmụaka na-azụ azụ mmanụ
Ọ bụrụ na ị kpebie ịnye mmanụ azụ nwa, mgbe ahụ, ka m ka nwere ike ịgakwuru onye na-elekọta ụmụaka. Dị ka a na-achị, a na-ekpebi usoro ọgwụgwọ ahụ n'otu n'otu. Ụmụaka si izu anọ ga - edozi ọgwụ atọ ugboro abụọ n'ụbọchị, jiri nwayọọ nwayọọ na - amụba mkpụrụ ọgwụ ½ -1 teaspoon kwa ụbọchị. Ụmụaka nọ n'okpuru afọ nke otu a họpụtara teaspoon kwa ụbọchị, ruo afọ abụọ - 1-2 teaspoons, site na afọ atọ ma ọ bụ isii - otu ihe eji eri nri ọnụ, na ụmụaka ihe karịrị afọ asaa - otu tablespoon 2-3 ugboro ụbọchị (usoro ọgwụgwọ dị otú ahụ maka ndị okenye). Dịka iwu, a na-ewe mmanụ maka ọnwa 2-3, ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa, nke abụọ, weghaara otu ọnwa ma kwughachi usoro ahụ.
Kedu esi kụziere nwatakịrị ka ọ rie mmanụ
Echere m na ọ bụrụ na ị malitere inye mmanụ azụ nwa gị dị ka ọ bụ site na nwa, nsogbu ndị ọ nabatara ga-abụ ihe na-erughị ma ọ bụrụ na ị kpọpụtara nwa ahụ na ngwaahịa a mgbe ọ dị otu afọ. Ọ bụ ezie na, n'aka nke ọzọ, mgbe otu afọ gasịrị, ị ga-ekwenye na nwa ahụ gbasara ihe niile dị n'ụwa, ọ bụrụ n'ezie, gbalịsie ike. Ọ kacha mma inye nwa ahụ ọgwụ ahụ mgbe ọ na-eri, ebe dị n'etiti "usoro" ahụ. Ya mere, nwa ewu agaghị aṅụ abụba na afọ efu, na mgbakwunye, ọ ga-enwe ohere iji "rie" nri dị ụtọ nke ọgwụ. Ọ bụ ya, ya bụ, anyị na nwa nwanyị ma were ọgwụ. I nwekwara ike igosi nwatakiri otu esi eji mmanu ohia n'omume nke aka ha, inye gi ihe ndi a bara uru. N'ịbụ onye nwere mmasị, nwatakịrị ahụ ga-achọ ịnwale ọgwụ ahụ n'onwe ya.
Mgbe ị gụsịrị isiokwu a, ị ga-ekwenye n'eziokwu na uru nke mmanụ azụ maka ahụ nwa na-eto eto. Ugbu a, ị maara nke ọma ihe ọ dị mkpa maka ya, olee uru na uru ọ bara na vitamin D, na otu esi enye ụmụ anụmanụ mmanụ na-enye ha nri kwesịrị ekwesị. Ahụike nye gị na ụmụ gị!
Ịntanetị - uru ma ọ bụ nsogbu nye nwa akwụkwọ ahụ?
Ịhịa aka ụmụaka na scoliosis
Isi isi nke nwata
Mgbaàmà na ọgwụgwọ nke impetigo na ụmụaka
Enwere m ike ịgwọ ọrịa na-adịghị ala ala ugboro ugboro
Achịcha na-ekoghị acha na poteto na eyịm
Kedu otu m si mee ahụ zuru oke mgbe ọ bụla atọ: Atụmatụ nke nnukwu nne
Ndị na-agụ akwụkwọ dee
Nye nna ukwu nke ederede: ndụmọdụ bara uru
N'ala nke nrọ ahụ: ejiji mbụ na nkwa 2016
Achịcha Thai Tom KXA
Blackberry eji megharịa ọnụ
Kedu otu esi eji dochie mpi dochie nkịta?
Ngwọrọgwu ndị mmadụ maka ọgbụ na vomiting
Nkwuwa okwu na Christmas - ememe anwansi nke imeju ọchịchọ
Aro maka acupressure maka ụmụaka
Foto mbido mbụ: ihe ị ga-eyi na September 1?
Nwa ahụ nwere isi ọwụwa
Otu esi emeputa umuaka di ala
Ọnwa nke asaa nke ndụ nwata